नयाँ पार्टी गठन र प्रचण्डसँग एकता गर्न एमालेबाट बाहिरिदै माधवसमूह – Khabar Patrika Np
नयाँ पार्टी गठन र प्रचण्डसँग एकता गर्न एमालेबाट बाहिरिदै माधवसमूह
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत्र ०४, २०७७ समय: २१:०७:५४
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपाल पक्षलाई पाखा लगाएर नै पुनस्थापित नेकपा एमाले चलाउने तयारी गरेपछि संसदको सबैभन्दा ठूलो यो पार्टी विभाजित हुने अवस्थामा पुगेको छ । अध्यक्ष ओलीले आफ्नो समूहका केही नेताहरूसँग माधव नेपालबाहेक नै एमालेलाई अगाडि बढाउने योजना सुनाएका छन् भने नेपाल पक्षले पनि एमालेको समानान्तर संरचना तयार गर्दै नयाँ पार्टी स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ।
प्रधानमन्त्री ओली निकट एक नेताका अनुसार अब सरकार नरहने विश्लेषण गर्दै ओली पक्ष माधव नेपाल पक्षलाई एमालेमा नभित्र्याउने बरु अझै निर्मम तरिकाले कारबाही प्रक्रिया चलाउने निष्कर्षमा पुगेको हो। ‘अब सरकार रहँदैन भन्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुगेकोजस्तो देखिन्छ, त्यसपछि नै माधव नेपाल बिना नै एमालेलाई अगाडि बढाउने तयारी उहाँले गर्नु भएको छ’, ती नेताले भने।
गत शुक्रबार माधव नेपाल पक्षलाई नबोलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजना गरिएको ओली पक्षको भेलाले पूर्वमाओवादीबाट एमालेमा समाहित भएका रामबहादुर थापासहित २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त गरि माधव नेपाल पक्षका नेताहरूको जिम्मेवारी समेत खोसेपछि विवाद चर्किएको हो।
नेपाल पक्षले शुक्रबार गरिएको निर्णय फिर्ता लिएर वाम गठबन्धनको सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र पार्टीका सबै बैठक पार्टी कार्यालयमा हुनु पर्ने शर्त राखेको छ । चैत ७ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राखेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेपाल पक्ष सहभागी नहुने छनक पाएपछि ओलीले स्थिति सामान्य तुल्याउन ३ गते बालुवाटारमै चियापान आयोजना गरेका छन्।
माधव नेपाल पक्षलाई एमालेबाट अलग गर्ने ओलीको एकलौटी निर्णयप्रति उनी निकट नेताहरू समेत सन्तुष्ट छैनन्।ओलीले बालुवाटारमा त्यस्तो निर्णय गरेलगत्तै शुक्रबार नै माधव नेपाल पक्षका स्थायी समिति सदस्यहरूको भेलाले राष्ट्रिय भेला बोलाउने निर्णय गरेको छ।
एक,अहिले सुरु भएको एमालेको समानान्तर संरचना देशभर विस्तार गर्ने। केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म र जनसंगठनमा पनि समानान्तर संरचना निर्माण गर्ने।ओली पक्षलाई चुनौती दिँदै समानान्तर रुपमा एमाले पार्टी सञ्चालन गर्ने। चैत ४ र ५ गतेको राष्ट्रिय भेलाले समानान्तर संरचना निर्माण गर्ने योजना तय गर्ने।
यो भेलालाई नेपाल पक्षले ओलीको निर्णयसँग असहमत हुनेहरूको भेला भनेको छ। त्यसपछि २ जेठ २०७५ को सांगठनको संरचना अनुसार देशव्यापी रुपमा एमालेकै नामबाट कार्यक्रमहरू गर्ने।
दुई,ओलीले एमाले एकीकृत नबनाउने तयारी गरेकाले माधव नेपाल पक्षले समानान्तर संगठन संरचना बनाउँदै अन्ततः नयाँ पार्टी गठन गर्ने तयारी गरेको छ। नयाँ पार्टी गठन गर्ने निर्णयमा पुग्दा नेपाल पक्षले आफ्नो पक्षका सांसदहरूको संसदको लोगो सामुहिक रुपमै ओलीलाई जिम्मा लगाउने तयारी समेत गरिरहेको बुझिएको छ ।
सांसद नै त्याग्न तयार भएपछि संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने बाध्यता पर्ने छैन। चार, पुनस्थापित माओवादी केन्द्रले नेकपालाई मान्यता नदिएर एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्याउने फैसला उल्टाउन सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जाने निर्णय गरेको छ। यदि अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्याउने निर्णय उल्टाइदिएन भने अन्ततः माधव नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टी र माओवादी केन्द्रबीच पुनः एकता गरेर नयाँ पार्टी बनाउने तयारी नेपाल पक्षले गरेको छ।
तीन,पुनस्थापित माओवादी केन्द्रले नेकपालाई मान्यता नदिएर एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्याउने फैसला उल्टाउन सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जाने निर्णय गरेको छ। यदि अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्याउने निर्णय उल्टाइदिएन भने अन्ततः माधव नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टी र माओवादी केन्द्रबीच पुनः एकता गरेर नयाँ पार्टी बनाउने तयारी नेपाल पक्षले गरेको छ।
झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पक्षले तय गरेका यी रणनीति प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्ष अहिलेकै जस्तो एकलौटी रुपमा हिँडिरहे मात्रै लागू हुने देखिन्छ। यदि शुक्रबार गरिएका निर्णय उल्टाएर सहमति जुटाउन ओली तयार भएभने यो पक्षले त्यही अनुसार रणनीति परिवर्तन गर्नेछ।
प्रचण्डले नेकपामा हुँदा ओलीविरुद्ध १९ पृष्ठको प्रतिवदेन प्रस्तुत गरेकै शैलीमा आइतबार नेपाल पक्षका ११ जना स्थायी समिति सदस्यहरूको वक्तव्य आएको छ। जसले एमाले सहमतितर्फ होइन विभाजनतर्फ उन्मुख भएको प्रष्ट संकेत गरेको छ।
नेकपा एमाले,एउटै नाम,तीन ठाम संघीय संसदको सवैभन्दा ठूला दल नेकपा एमाले मंगलबार तीन ठाउँमा देखियो–बालुवाटार, सानेपा र बल्खुमा । तीनै ठाउँ नेकपा एमालेको ब्यानर प्रयोग भएपनि व्यवहारिक रूपमा पार्टीभित्रका पार्टीका रुपमा थिए ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चियापान गियो भने सानेपामा बरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालको भोलिदेखि सुरु हुने राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबारे पत्रकार सम्मेलन र बल्खुमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको कार्यसम्पादन समितिको बैठक ।बालुवाटार र बल्खुमा आयोजित कार्यक्रमको त समय पनि एउटै थियो– विहान एघार बजे । दुवैतिरको कार्यक्रम नसकिँदै सानेपामा भोलि शुरू हुने राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबारे जानकारी दिन खनाल–नेपाल समूहको पत्रकार सम्मेलन शुरु भयो ।
‘बाइ द वे’ चर्चा गरेको भन्दै चियापान समारोहबाट अध्यक्ष ओलीले पार्टीका नेताविरुद्ध फायर खोले–, अचाक्ली भो । पार्टीलाई पार्टीका रुपमा चल्न नदिने, जहिले पनि भाँडभैलो अब हुन सक्दैन । ओलीले अगाडि थपे, ‘अनुशासनहीन भयो भने पार्टीको विधान छ, देशको कानून छ, संसद् नियमावली छ, दल सम्बन्धी कानून छ, यो सबैतिर ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’नेपाल समूहको भेला रोक्न आग्रह गर्दै ओलीले त्यसो नगरिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिए ।
यसको जवाफ एक घण्टा पनि पर्खनु परेन । खनाल–नेपाल समूहको पत्रकार सम्मेलन सचिव योगेश भट्टराईले दिए, तपाईले गर्ने प्रत्येक कारबाहीका लागि हामी लामबद्ध छौं ।’अर्का नेता सरेन्द्र पाण्डेले पनि ध्यक्ष ओलीले नै विधान विपरीत गुटको भेला गरेको भन्दै प्रश्न गरेका छन्, पार्टी विधान विपरीत काम गर्ने अध्यक्ष पनि कारबाहीको भागी हुने हो कि होइन ?’
यसअघि आफ्नो समूहको बैठकमा उपाध्यक्ष गौतमले पार्टी विभाजनसम्म आइपुग्नुमा सवै नेताहरुको दोष भएपनि पुनर्मिलनमा ओली समस्या बनेको बताए । उनले भने, ‘अदालतको फैसला लगत्तै एकताबद्ध पार्टी बनाउन आह्वान गर्नुपर्ने केपी ओलीले उल्टै पुनर्स्थापित एमालेका पदाधिकारी हटाएर समस्या ल्याउनुभयो ।’
आमने–सामने पुस ५ मा संसद विघटनपछि साबिकको नेकपा ओली र प्रचण्ड–माधव समूहमा विभाजित हुुँदा गौतमले नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान घोषणा गरेका थिए । सर्वोच्चको २३ फागुनको फैसलाले पुनस्र्थापित भएको एमालेमा ओली र माधवकुमार नेपाल समूहको विवाद चर्कियो । एमाले विभाजन उन्मुख भएपछि वामदेव गौतमले अभियानको नाम फेरे, नेकपा एमाले राष्ट्रिय एकता अभियान ।अभियानका सचिव बाबुराम थापा थापा एमाले एकता नगरी वाम एकता सम्भव नरहेकाले अभियानको नाम फेरेको बताउँछन् । ‘अदालतले नेकपा विघटन गरेर एमाले ब्यँुताइदियो, तर एमाले नै दुई वटा बन्यो । पहिले यसलाई मिलाउन भनेर एमाले एकता अभियान चलाएका हौं’, उनले भनेका छन् ।
यो अभियान एमालेकै एउटा घटक बनेको उनी स्वीकार्छन् । तर ओली वा खनाल–नेपाल तर्फभन्दा भिन्न सांगठानिक संरचनामा यो अभियान सञ्चालित छ ।एमालेमा मूल संघर्ष भने अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालको समूहबीच देखिएको छ ।
५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि खनाल–नेपाल लगायत नेताहरु ओलीबाट अलग भएका थिए । तर २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले फेरि एमाले ब्युँताए दिएपछि खनाल–नेपाल प्रचण्डसँग अलग भए । ओलीले भने प्रचण्डसँग मिलेर चार पटक आफूलाई कारबाही गर्ने खनाल–नेपालले आत्मालोचना गर्नुपर्ने बताएका छन् । खनाल र नेपाल समूहको तर्क भने वादविवादबारे समिक्षा गरौंला, तर अदालतको फैसलाअनुसार २ जेठ २०७५ मा फर्किनुपर्ने छ ।
सार्वजनिक वाद प्रतिवादसँगै दुबै समूहले अलग–अलग गतिविधि गरिररहेका छन् । अध्यक्ष ओलीले २८ फागुनमा आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक राखेर विधान संशोधन गर्ने, एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी खारेज गर्ने, आफू इतर समूहका नेताहरुको विभागीय जिम्मेवारी खोस्ने, आफूलाई साथ दिने माओवादी तर्फका २३ नेतालाई केन्द्रीय सदस्य मनोयन र जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेका छन् । २९ फागुनमै महिला र पत्रकारको भेला भयो । विशेषगरी सम्पर्क मञ्चहरुको नेतृत्व चयन गरिरहेका ओलीले ५ पुस यता गरिएका कुनै निर्णय नबदल्ने अडान लिएका छन् ।
यसको काउन्टरमा नेपाल पनि समानान्तर गतिविधि बढाएको छ । ओलीले गरेको संगठनात्मक निर्णयलाई मान्यता नदिन माग गर्दै १ चैतमा निर्वाचन आयोगमा पत्र बुझाएको यो समूहले भोलि बुधबारदेखि दुई दिने राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएका छन् ।
६ चैतमा महिला र पत्रकारको एकैदिन राष्ट्रिय भेला हुँदैछ भने ७ चैतमा युवा भेला राखिएको छ । नेपाल समूहमा रहेका पार्टी सचिव योगेश भट्टराई भेन यो समानान्तर गतिविधि नभएर पार्टी पुनर्संरचना गरिएको बताउँछन् ।
‘अदालतले हामीलाई जुन ठाउँमा जान आदेश दिएको छ, त्यहीबाट पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान्छौं । त्यही नै हाम्रो निर्णय हो’, उनी भन्छन् । यो समूहको गतिविधि र निर्णयले भने ओलीले पेलेर अगाडि बढेकाले छुट्टै पार्टी निर्माणको अभ्यास थालेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । जस्तो– २८ फागुनको ओलीको निर्णय प्रति आपत्ति जनाउँदै यो समूहका ११ स्थायी कमिटी नेताहरुले १ चैतमा सार्वजनिक संयुक्त बक्तव्यमा उल्लेखित आरोप । उक्त बक्तव्यमा, ओलीलाई पार्टी विसर्जनतिर लागेको गम्भीर आराप लगाइएको छ ।
तर अध्यक्ष ओलीले भने २८ फागुनको निर्णय सच्याउनुको साटो पार्टी नेताहरुमाथि अनुशासनको कारबाही गर्ने संकेत दिएको छ । ७ चैतमा बोलाएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले बोलाएका उनी विभागीय जिम्मेवारी र पार्टी संरचनाबारे निर्णय गर्ने सम्भावना हरको ओली निकट एक नेताले जाजकारी दिए । उनका अनुसार केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेपाल खेमाका नेताहरु नआए जिल्ला इन्चार्जदेखि बाँकी विभागीय प्रमुखहरु तोकिन सक्ने उनी बताउँछन् ।
प्रदेश तहको नेतृत्व टुंग्याउनुका साथै विदेश, प्रचार, प्रवास, आर्थिक र निर्वाचन विभागको प्रमुख तोकिसकेका छन् । ७ चैतमा खनाल र नेपाल खेमालाई थप भूमिकाविहीन बनाउने गरी पार्टी संरचना बनाउने सम्भावना रहेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन् ।
जबकी नेपाल समूहले केन्द्रीय कमिटीमा आउनकै लागि पनि २८ फागुनको निर्णय खारेजलाई शर्त बनाएको छ । सोमवार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा भएको शीर्ष नेताहरुको वार्तामा पनि नेपाल समूहका नेताहरुले २३ फागुनको फैसला अनुसार, २ जेठ २०७५ को सांगठानिक संरचना नभए सहमति हुन नसक्ने बताएका थिए । तर ओलीले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न चाहेनन् । त्यसको जवाफमा नेपाल समूहले पनि राष्ट्रिय भेलाबाट राजनीतिक कार्यक्रम, सांगठानिक संरचना र आगामी रणनीति समेत तय गर्ने संकेत दिएका छन् ।
यद्यपि तीनै समूहका नेताहरु एकताबद्ध एमाले सम्भव रहेको र आफूहरुको गुटगत त्यसका लागि भएको तर्क गर्न छाडेका छैनन् । एकता अभियानका लागि समूह बनाएका गौतम मात्र होइन, बालुवाटारमा चियापान गर्ने ओली समूह, सानेपामा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको तयारीमा जुटेको माधव समूहले पनि त्यही तर्क गरेका छन् । तर, तीन वटै कार्यक्रममा प्रकट अभिव्यक्तिले भने एमाले त्यस विपरत विभाजनको दिशातिर उन्मुख भएको प्रष्ट संकेत छ ।
तीनै समूहका नेताहरुमा भने साझा निष्कर्ष छ, एमाले पहिलेको एमाले जस्तो रहेन । खनाल–नेपाल समूहको पत्रकार सम्मेलनपछि स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तीन वर्ष अगाडिको एमाले कस्तो थियो ? अहिले त्यस्तो छैन ।’
यसमा ओली समूहका नेताहरु पनि सहमत छन् । प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भन्छन्, ‘समय अझै छ । सम्वाद र छलफलका माध्यमबाट सवै ठाउँ उभिने बातावरण बनाउनुपर्छ । यसको विकल्प पनि छैन’, उनी भन्छन् । तर, एमाले पहिलेको जस्तो नरहेकोमा भने उनी नेता पाण्डेसँग सहमत छन् ।
खनाल-नेपाल समूहको राष्ट्रिय भेला आजदेखि सुरु हुँदै नेकपा एमालेको झलनाथ खनाल-माधव नेपाल समूहको राष्ट्रिय भेला आजदेखि काठमाडौंमा सुरु हुँदैछ । बिहीबारसम्म चल्ने भेलाका लागि जिल्ला जिल्लाबाट मंगलबार नै नेताहरु काठमाडौं आइसकेका छन् । नजिकका नेता-कार्यकर्ता बुधबार आइपुग्ने समूहले बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो समूहका बाहेक सबै नेताहरुको जिम्मेवारी खोसेपछि खनाल-नेपाल समूहले भेला गर्न लागेको हो । यो समूहले भेला आयोजना गर्न लागेपछि अध्यक्ष ओलीले वार्तामा बोलाएका थिए तर कुरा मिल्न नसकेपछि आजदेखि भेला आयोजना हुन लागेको हो ।
भेलाका लागि खनाल-नेपाल समूहले भीम आचार्यलाई प्रदेश १, घनश्याम भुसाललाई प्रदेश २, अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई बागमती, सुरेन्द्र पाण्डेलाई गण्डकी, युवराज ज्ञवालीलाई लुम्बिनी र कर्णाली तथा भीम रावललाई सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारीसमेत दिएको थियो ।
माओवादीमा फर्किन्नँ,माधव नेपाललाई एमालेमा स्वागत छ :रायमाझी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले सांसद पद गएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साथ नछाड्ने बताएका छन् । माओवादी नफर्किने जिकिर गरेका उनले एमालेमा माधव नेपाल समूहलाई स्वागत गर्ने बताए ।
बरु प्रचण्डसँग लागेर एमालेमै फर्किएका नेतालाई ओलीसँग काम गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै रायमाझीले मन नबिगारी फर्कन माधव समूहलाई आग्रह गरे । ‘हामी त भइरा’छौँ भने अरु साथीलाई के गाह्रो छ ? हामी खुसी छौँ,’ उनले भने, ‘बाटो बिराएका, मन बिगारेका साथीहरूलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गरौँ ।’